पुनर्संरचना कार्यान्वयनपछि बढ्यो असन्तुष्टि - Naya Patrika
पुनर्संरचना कार्यान्वयनपछि बढ्यो असन्तुष्टि
स्थानीय तह पुनर्संरचना हचुवाको भरमा गरिएको भन्दै धनुषाका करिब दर्जन तत्कालीन गाविसमा आन्दोलन सुरु भएको छ । कतिपय गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । महेन्द्र नगरपालिका, रघुनाथपुर, बेगाडाबर, लोहना, हरिहरपुर, नगाराइन, खरिहानी, हंसपुर, सबैला नगरपालिकालगायत स्थानमा आन्दोलन सुरु भएको हो । अधिकांश गाउँपालिकाका स्थानीयले साविककै नगरपलिकामा रहने गरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार मात्र हरिहरपुरका स्थानीयले साविककै क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भन्दै सो नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् ।
स्थानीयले आइतबार नै जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डमा एक घन्टा यातायातसमेत अवरुद्ध गरे । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा हरिहरपुरलाई मिथिला नगरपालिकामा गाभिएको छ । यसअघि सो गाविस क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर ८ र ९ मा थियो । लोहनाका स्थानीयले पनि साविकको जनकपुर उपमहानगरपालिका रहनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लोहनालाई नयाँ संरचनामा नगराइन नगपालिकामा गाभिएको छ । रघुनाथपुरका स्थानीय पनि दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । करिब १४ हजार जनसंख्या रहेको रघुनाथपुरलाई आठ हजार जनसंख्या भएको गाविसमा गाभेर अन्याय गरेको स्थानीयको आरोप छ । साविक सबैला नगरपालिकामा रघुनाथपुरको १ देखि ८ नम्बर वार्ड र चारनाथ नगरपालिकामा ९ नम्बर वार्डलाई राखिएको छ ।
खरिहानीका स्थानीय पनि पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलित छन् । मिथिला नगरपालिकाबाट हटाएपछि एक सातादेखि आन्दोलित बेगाडावरका स्थानीयवासीले मिथिला नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पुष्पा झाले पुनर्संचनाको विवाद पुनर्संरचना आयोग र सरकारले समाधान गर्ने विषय भएको बताइन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको बोर्डमा मोर्चाको ब्यानर
सर्लाही/ सदरमुकाम मलंगवास्थित जिल्ला समन्वय समितिको बोर्डमा मधेसी मोर्चाले ‘मधेस प्रदेश सरकार’को ब्यानर राखेको छ । मोर्चाका नेता अशोक राय यादवको नेतृत्वमा आइतबार दिउँसो सो ब्यानर राखिएको हो । मोर्चाले गरिरहेको असहयोग आन्दोलनअन्तर्गत स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अवरोध कायमै रहेको नेता यादवले बताए । यादवले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तत्काल काम नगर्नुस् भनेका छौँ, जबर्जस्ती गर्न खोजे मोर्चाले प्रतिकार गर्नेछ ।’ मोर्चाले दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम अघि बढाउन दिएको छैन । पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्लाहीमा १० नगरपालिका र सात गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रका लालबन्दी, हरिवन, कर्मैया र हरिपुर नगरपालिकामा भने मोर्चाले कुनै अवरोध गरेको छैन । यी चारवटै नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।
तोकिएका केन्द्रमा असन्तुष्टि
पर्वत/ सरकारले तोकेको गाउँ र नगरपालिका केन्द्र अपायक भएको भन्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको छ । जिल्लामा पाँच गाउँपालिका र दुई नगरपालिका छन् । तीमध्ये फलेवास नगरपालिका तथा जलजला, विहादी र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरु भएको छ । जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गतका नाग्लिवाङ, धाइरिङ, सालिजा, लेखफाँट र बनौँका स्थानीय आन्दोलनमा छन् । जलजलाको माझफाँट केन्द्र पायक नपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यसअघि प्रस्ताव गरी पठाइएको मिलनचोक र वारीबेनीमध्ये एक स्थानमा केन्द्र तोक्नुपर्ने बताए । आइतबार मिलनचोक बजार बन्द नै गरेर स्थानीय सदरमुकाम कुश्माबजारमा आएका थिए । त्यस्तै, डिमुवा मुख्य बजार क्षेत्र पर्ने मोदी गाउँपालिकामा पनि विरोध भएको छ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले देउपुरमा केन्द्र तोकेपछि स्थानीयले केन्द्र परिवर्तनको माग गरेका छन् । यता, विहादी गाउँपालिकावासी पनि असन्तुष्ट छन् । विहादी गाउँपालिका साविकको वडा नं. १ बाच्छा, वडा नं. २ बर्राचौर र वडा नं. ३ रानीपानीका स्थानीयवासीले तोकिएको केन्द्र अपायक भएको बताए । उनीहरूले गाउँपालिकाको उद्घाटनमा असहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गाउँपालिकामा घटुवापछि आन्दोलन
सप्तरी/सरकारले सप्तकोसी नगरपालिकालाई घटुवा गरी गाउँपालिकामा सीमित गरिदिएपछि स्थानीयवासी र राजनीतिक दल विरोधमा उत्रेका छन् । विभिन्न आठ दलले आइतबार गठन गरेको सर्वदलीय संघर्ष समिति र स्थानीयवासीले नगरपालिका कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा स्थानीयले आइतबार नगरपालिका कार्यालयअगाडि आइतबार चक्काजाम गरे । नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा भइसकेको अवस्थामा पुनः गाउँपालिकामा सीमित गरेपछि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको स्थानीय युवा खगेन्द्र कार्कीले बताए । आठ राजनीतिक दलले गाउँपालिका कार्यालयमा १ चैतबाटै तालाबन्दी गरेको उनले बताए ।
आठै दलका प्रतिनीधि गत १ चैतमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले ‘यस्तो नहुनुपर्ने, कसरी भयो ?’ भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेको संघर्ष समितिका संयोजक नारायण आचार्यले जानकारी दिए । तर, सरकारले गाउँपालिका नै कायम गरी कार्यकारी अधिकृत तोकेर पठाएपछि तालाबन्दी गरेको एमाले जिल्ला सल्लाहकार समिति सदस्यसमेत रहेका आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार सोमबार पुनः स्थानीय विकासमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । दबाबका लागि सोमबार दुई घन्टा बजार बन्द गरी चक्काजामको कार्यक्रम राखिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता सन्तोष खतिवडाले बताए । यसअघि सो स्थानलाई छिमेकी कञ्चनरूप नगरपालिकामा गाभ्न खोजिएको थियो । तर, स्थानीय नमानेपछि थाहै नदिई गाउँपालिका बनाइएको उनीहरूले बताए । ०७१ सालमा कमलपुर ओद्राह र फत्तेपुर मिलाएर सप्तकोसी नगरपालिका बनाइएको थियो ।
झापामा थपिए ८० हजार नयाँ मतदाता
बागलुङमा ११ हजार मतदाता थपिए
जाग्री हत्याः क्याम्पसको ताला अझै खुलेन, अाजबाट पठनपाठन सुरू
धनकुटाको दियालो गेष्ट हाउसमा लुटपाट